सावधान ! यी खानेकुरा खाली पेट खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अल्सर र क्यान्सरसम्मको रोग – Annapurna Daily
On Feb 1, 2022 9,870
अमिलो फल: खाली पेटमा अमिलो जन्य फल पनि खानु हुँदैन । खाली पेटमा अमिलो फल खाने गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। सुन्तला, कागती, अम्बा, अचार, लप्सीलगायतका फल खाली पेट खानु हुँदैन। अंगुर, आँप तथा अमिलोयुक्त फलफूलले पेटमा एसिड बढाउने काम गर्छ । त्यसैले चिकित्सकहरुले यस्ता फलहरु खाना पछि मात्र खान सुझाव दिएका छन्।